Wasiirka Bayle oo shir uga qeyb galaya Dalka Kuwai – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-53690 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / Wasiirka Bayle oo shir uga qeyb galaya Dalka Kuwai
Wasiirka Bayle oo shir uga qeyb galaya Dalka Kuwai
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa gaaray Magaalada Kuwait City, halkaasi oo uu kaga qeyb geli doono Shirka Dhaqaalaha Carabta, kaasi oo ka dhici doona magaaladaasi.
“Waxaan gaaray Magaalada Kuwait City oo aan dhawaan uga qeyb galidoono shirka dhaqaalaha Carabta. Waxaan u mahadcelinayaa Masuuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Kuwait oo si heer sare ah iisoo dhaweeyay”ayuu yiri wasiirka.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya, iyadoo dhawaan warbixin ay soo saartay Hay”adda lacagta Aduunka ee IMF lagu bogaadiyey koboca dhaqaale ee Soomaaliya.
← Previous Story Doorashada Jubbaland danaysi ma noqon karto
Next Story → Ciidamadii Kenya ee ka guuray Gedo ayaa kusii wajahan Kismaayo